प्रहरी–विप्लव समूहको ‘भिडन्त’ पछिका पाँच ‘फण्डा’
काठमाडौं : भोजपुर नगरपालिका–७ मा बुधबार विहान भएको गोली हानाहानमा दुईजना मारिएका छन्।
नेपाल प्रहरीका जवान (घुमुवा) संजीव कुमार राई र नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता नीरकुमार राई मारिएका हुन्।
दुबैको लास जिल्ला अस्पताल भोजपुरमा राखिएको छ।
प्रहरीतर्फबाट मारिने संजीवको घर खोटाङ्गको हलेसी तुवाचुङ्ग नगरपालिका–३ च्यास्मिटार हो भने विप्लवतर्फबाट मारिने नीरकुमारको घर भोजपुरकै षडानन्द नगरपालिका–१३ मा छ।
विगत ढेड वर्षदेखि भूमिगत रहँदै आएका नीरकुमारकी श्रीमति भोजपुर नगरपालिकामै डेरा गरी बस्दै आएकी छिन्।
भोजपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नूरहरि खतिवडा घटनालाई यसरी बयान गरे :
भोजपुर बजारमै नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहको शंकास्पद गतिविधि बढेको थाहा पाएपछि प्रहरीले सर्च अपरेशन चलाएको थियो। बुधबार हटिया लाग्ने दिन भएकोले त्यसतर्फ सादा पोसाकका ५ जना प्रहरी गस्तीमा थिए।
विप्लवका मान्छे आएको जानकारी पाएपछि सादा पोसाकका प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्न खोज्दा लछारपछार भयो र प्रहरी जवान सोमनाथ भट्टराईको कुमको हड्डी भाँचियो। सो क्रममा विप्लव समूहका ती कार्यकर्ताले प्रहरी जवान सञ्जीव राईमाथि गोली प्रहार गरे। प्रहरीबाट पनि जवाफी कारवाही भयो।
एकजना प्रहरी र एकजना विप्लवका नेताको मृत्यु भयो।
भोजपुर नगरपालिकाका मेयर कैलाशकुमार आले यसरी घटना सुनाए :
हटियालाइनको पाँचधारे होटलमा नेकपा विप्लवका कार्यकर्ताहरू विहानैदेखि अड्डा जमाएर बसेका थिए। त्यही चिया खान भनेर सादा पोशाकका प्रहरी सञ्जीव राई पुगेका थिए। विप्लवका नेता नीरकुमार राई आफ्ना दुई कार्यकर्तासहित बसेको अवस्थामा सञ्जीव राई पनि पुगेका थिए र त्यसक्रममै विवाद भयो।
विवाद असामान्य बन्ने क्रममा दुवै पक्षबीच ठेलाठेला, हात हालाहाल हुन थाल्दा नीरकुमारले पेस्तोल झिकेर भन्न थालेछन्, ‘तिमीहरूको जस्तो बन्दुक हामीसँग पनि छ।’
सञ्जीवले नीरकुमारलाई घाँटीमा अँठ्ठयाएर नियन्त्रणमा लिन खोज्दा नीरकुमारले हातमा भएको पेस्तोलले सञ्जीवको टाउकोमा गोली हाने। सञ्जीव भुईंमा ढलेपछि सादा पोशाकमा भएका अन्य प्रहरीले गोली चलाउँदा नीरकुमार पनि ढले।
भोजपुरका डिएसपी नरबहादुर सलामी मगरका अनुसार :
भोजपुर बजारमै विप्लव समूहको बैठक बस्दैछ भनी मंगलबार राति प्रहरीलाई सूचना आएको थियो। मंगलबार रातिबाट नै खोजी सुरु भएको थियो तर पता लागेन। बुधबार विहान सादा पोशाकका प्रहरी टोली खोजिमा निस्केको थियो।
होटलमा विप्लवका कार्यकर्ताहरु बसेको सुराकका आधारमा प्रहरी त्यहाँ पुगेको थियो। त्यहाँ प्रहरी जवान संजीवले उनीहरुलाई पक्राउ गर्न खोज्दा विवाद भएको थियो।
त्यसपछि नीरकुमारले गोली चलाए। संजीवलाई गोली लाग्यो, प्रहरीले पनि गोली चलायो त्यो नीरकुमारलाई लाग्यो। अन्य विप्लवका कार्यकर्ताहरु भागे।
बुधबार संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा ‘नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’माथि छलफल चलिरहेको थियो। तर, भोजपुरको घटनाको समाचार आउन थालेपछि छलफल अन्त्यै मोडियो।
समितिको बैठकमा विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, गृहसचिव प्रेमकुमार राई र प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल उपस्थित थिए।
भोजपुरको समाचार आएपछि कांग्रेस सांसद डा. डिला संग्रौला पन्तले भोजपुर घटनाबारे गृहमन्त्री थापा र प्रहरी महानिरीक्षक खनालबाट विवरणको जानकारी माग गरिन्।
विधेयकमाथि चलिरहेको छलफललाई अन्तै मोडेर उनले भनिन्, ‘यो संवेदनशील विषय हो। सुरक्षा व्यवस्था के भइरहेको छ? भोजपुरमा भिडन्त भयो र मान्छेको मृत्यु भएको कुरा उठेको छ, वास्तविकता के हो?’
भोजपुर घटनाबारे प्रहरी संयन्त्रकै फरक फरक धारणा आइरहेको छ। प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) रमेश थापाले सादा पोसाकका प्रहरीले जबाफी फायरिङ खोलेको र नीरकुमारसमेत घाइते भएको बताएका थिए।
उनको त्यो प्रतिक्रिया घटनाभएलगतै आएको थियो। त्यही क्रममा घाइते भएका दुवै जनाको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको थापाले जनाएका थिए
यसैगरी, प्रदेश १ का प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीका अनुसार सो घटना आकस्मिक नभएर योजनाबद्ध र छापामार शैलीमा गोली चलाएको बताएका थिए।